Nhau, 28 Mbudzi 2017
Chipiri 28 Mbudzi 2017
Zanu PF Inodzinga VaChombo, VaMoyo, VaKasukuwere neVamwe Muparamende
Dare reparamende razivisa kuti bato riri kutonga reZanu PF rakanyorera neMuvhuro kudare iri kuti VaIgnatius Chombo, VaSaviour Kasukuwere naProfessor Jonathan Moyo, VaKudzi Chipanga naMuzvare Mandi Chimene havachamirira zvido zvebato iri muparamende nekudaro vanofanira kudzingwa mudare iri.
Veruzhinji Vokurudzirwa Kusaita Huori neMapurisa
Mapurisa nemauto atenderera muguta reBulawayo vachikurudzira vanhu kuti vasabvume kuita zvechiwokomuhomwe kana zvehuwori nemapurisa.
Ndiyani Achatora Mukombe waSoccer Star Gore Rino
Vasarudzi veCastle Soccer Star of the Year vaungana muHarare vachisarudza vatambi gumi nemumwe chete vari kurwira kutora mukombe mukuru uyu.
VaMnangagwa Vopa Mwedzi Mitatu Vakaburitsa Upfumi Kunze Kuti Vahudzore
Mutungamiri wenyika mutsva, Vaemmerson Mnangagwa vanoti sedanho rekutanga rekuti mari neupfumi zvakabuditswa munyika zviri kunze kwemutemo zvidzoke, hurumende yavo icharegerera vakaburitsa mari ava.
Misoro yeNhau dzaNhasi, Chipiri, Mbudzi 28, 2017
Mutauriri weparamende, VaJacob Mudenda, vanozivisa kuti bato reZanu PF radzinga muparamende, nhengo dzaro shanu, dzinosanganisira vaimbove makurukota ehurumende, VaIgnatius Chombo, VaSaviour Kasukuwere naProfessor Jonathan Moyo.
Chigaro chaPolitical Commissar Chinopihwa Vane Nhoroondo yeHondo muZanu PF
Munyori mukuru wesangano revakarwa hondo, re Zimbabwe National Liberation War Veterans Association, VaVictor Matemadanda, vanoti sangano ravo rinotambira nemufaro mashoko akaziviswa nemunyori anoona nezvemitemo mubato re Zanu-PF, va Patrick Chinamasa.
VaMnangwagwa Vokurudzirwa Kuumba Hurumende Duku
Bato guru rinopikisa munyika reMDC inotungamirwa naVaMorgan Tsvangirai rinoti mutungamiri wenyika VaEmmerson Mnangagwa vanofanira kuderedza huwandu hwemakurukota ehurumende pavari kuumba hurumende yavo itsva.
Vamwe veDzisvondo Votambira VaMnangagwa seMutungamiri Mutsva
Vamwe vedzisvondo vanoti vanotambira nemufaro chiitiko chekuchinjanwa kwemasimba ekutungamira nyika chakaonekwa muZimbabwe svondo rapera, apo vaive mutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe vakabvuma kusiya chigaro mushure mekupindira kwemauto.
Terrens Muradzikwa Osarudzwa Kuenda kuOxford neZimbabwe Rhodes Selections Committee
Komiti yeZimbabwe Rhodes Selection Committee yakadoma Terrens Muradzikwa kuti apihwe bhezari rekuenda kuOxford.
VaChombo Vanonyimwa Mukana Wekuti Vabvise Mari yeChibatiso
Vaimbova gurukota rezvemari, VaIgnatius Chombo, pamwe nevaimbova mutungamiri muboka revechidiki mu Zanu PF, Va Kudzanai Chipanga, vanyimwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso nedare ramejasitiriti remu Harare.
Amai Mnangagwa Vokurudzirwa Kusaita saAmai Mugabe
Mudzimai wekutanga munyika, Amai Auxilia Mnangagwa, vari kukurudzirwa neveruzhinji rwe Zimbabwe kuti vasiye zvematongerwe enyika vangomirira kuita basa semudzimai wemutungamiriri wenyika kuti vasazokwesherane nevamwe mubato rinotonga sezvakaita Amai Grace Mugabe.